Waxaa la aasaasay iyadoo la rumaysan yahay in Minnesota ay soo jiidanayso marka ay farshaxannadu sii fiicnaato, barnaamijka farshaxanka McKnight Foundation waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn oo ugu weyn ee nooca waddanka ah. Taageero loogu talagalay shaqsiyaadka shaqeeya ee Minnesota ee farshaxan-yada ayaa ahaa mawduuc ka mid ah barnaamijka tan iyo bilowgii 1981. Barnaamijka McKnight Artist Fellowships wuxuu bixiyaa abaalmarin lacageed oo sanadle ah, oo aan xaddidnayn oo loogu talagalay fanaaniinta Minnesota ee farshaxanka ku jira 10 nooc oo kala duwan. Ururada waxqabadka barnaamijka ayaa maamula isbahaysiga iyo qaabeynta iyaga si ay uga jawaabaan caqabadaha gaarka ah ee maaddooyinka kala duwan. Waqtigan xaadirka ah wuxuu aasaas u yahay $ 1.7 milyan sanadkiiba wadashaqeynaha gobolka oo dhan. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo mcknight.org/artistFellowships.
Qalabka boogaha ee 'McKnight'
Phil de la Vega, Sarkaalka kaqeybgalka digital, pdelavega@mcknight.org